गोपनीयता नीति • DutchtownSTL.org • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
अन्तिम अपडेट मे 5th, २०२० मा भयो।
डीटी २ • डाउनटाउन डचटाउन ("हामीलाई", "हामी", वा "हाम्रो") डचटाउनस्टाल.अर्ग वेबसाइट ("सेवा") संचालन गर्दछ।
यो पृष्ठले हाम्रो सेवा प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत सूचनाको सङ्कलन, प्रयोग र प्रकटीकरण सम्बन्धी तपाइँलाई हाम्रा नीतिहरूको बारेमा जानकारी दिन्छ।
हामी तपाईंको जानकारी कुनै पनिसँग प्रयोग गर्न वा साझा गर्दैनौं बाहेक यस गोपनीयता नीतिमा वर्णन गरिएको।
हामी तपाईको व्यक्तिगत जानकारी को लागी सेवा प्रदान र सुधार को लागी प्रयोग गर्दछौं। सेवा प्रयोग गरेर, तपाईं संग्रह र यो नीति अनुसार जानकारी को उपयोग को लागी सहमत हुनुहुन्छ। यस गोपनीयता नीतिमा अन्यथा परिभाषित नगरेसम्म, यस गोपनीयता नीतिमा प्रयोग गरिएका सर्तहरूकोच हाम्रो अर्थ र सर्तहरूमा समान अर्थ हुन्छ, डचटाउनस्टाईल.आर.सी.मा पहुँचयोग्य।
हाम्रो सेवा प्रयोग गर्दा, हामी तपाईंलाई हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा पहिचान गर्न सक्ने जानकारी प्रदान गर्न सोध्न सक्छौं जुन तपाईंलाई सम्पर्क गर्न वा पहिचान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। व्यक्तिगत पहिचान योग्य जानकारी ("व्यक्तिगत जानकारी") समावेश हुन सक्छ, तर सीमित छैन:
हामी तपाईको ब्राउजरले पठाउँदा सूचनाहरू स collect्कलन गर्दछौं जब तपाइँ हाम्रो सेवा ("लग डेटा") भ्रमण गर्नुहुन्छ। यो लग डेटाले तपाइँको कम्प्युटरको इन्टरनेट प्रोटोकल ("आईपी") ठेगाना, ब्राउजर प्रकार, ब्राउजर संस्करण, हाम्रो सेवा पृष्ठहरू जुन तपाइँले भ्रमण गर्नुभयो, तपाइँको भ्रमण गर्ने समय र मिति, ती पृष्ठहरूमा खर्च गरेको समय र अन्य जस्ता जानकारी समावेश गर्न सक्दछ। तथ्या .्क
कुकीज डाटाको सानो मात्राको साथ फाईलहरू हुन्, जसमा अज्ञात अद्वितीय पहिचानकर्ता समावेश हुन सक्छ। कुकीहरू तपाइँको ब्राउजरमा वेब साइटबाट पठाइन्छ र तपाइँको कम्प्यूटरको हार्ड ड्राइभमा भण्डारण गरिन्छ।
हामी जानकारी स collect्कलन गर्न "कुकीहरू" प्रयोग गर्दछौं। तपाइँ तपाइँको ब्राउजरलाई सबै कुकीहरू अस्वीकार गर्न वा कुकी पठाउने बेलामा संकेत दिन निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म, यदि तपाइँ कुकिजहरू स्वीकार गर्नुहुन्न भने, तपाइँ हाम्रो सेवाको केहि अंशहरू प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुन्न।
हामी सेवा-सेवाहरू प्रदर्शन गर्न वा हाम्रो सेवा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर विश्लेषण गर्न हामीलाई विश्लेषण गर्न हामीलाई सहयोग गर्न हाम्रो तर्फबाट सेवा प्रदान गर्न हाम्रो सेवालाई सुविधा प्रदान गर्न तेस्रो पक्षका कम्पनीहरू र व्यक्तिहरूलाई काम गर्न सक्दछ।
यी तेस्रो पक्षहरूले तपाईको व्यक्तिगत जानकारीको लागि मात्र हाम्रो तर्फबाट यी कार्यहरू प्रदर्शन गर्न र कुनै पनि उद्देश्यको लागि खुलासा वा प्रयोग गर्न बाध्य हुदैन।
तपाईंको निजी सूचनाको सुरक्षा हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ, तर सम्झनुहोस् कि इन्टरनेटमा ट्राफिकको कुनै पनि तरिका छैन, वा इलेक्ट्रोनिक भण्डारणको तरिका 100% सुरक्षित छ। हामीले व्यक्तिगत जानकारीको सुरक्षा गर्न व्यावसायिक रूपमा स्वीकार्य माध्यमहरू प्रयोग गर्न प्रयास गर्दा, हामी यसको पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौं।
हामीसँग कुनै नियन्त्रण छैन, र सामग्री, गोपनीयता नीतिहरू वा कुनै तेस्रो पक्ष साइटहरू वा सेवाहरूको प्रथाहरूको लागि कुनै जिम्मेवारी छैन।
हामी जान्दछौं कि 18 अन्तर्गत बच्चाहरु बाट व्यक्तिगत रूपमा पहिचान योग्य जानकारी एकत्रित छैन। यदि तपाईं अभिभावक वा अभिभावक हुनुहुन्छ र तपाईलाई थाहा छ कि तपाईको बच्चाले हामीलाई व्यक्तिगत जानकारी प्रदान गर्नुभएको छ, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। यदि हामी पत्ता लगायौं कि 18 अन्तर्गत एक बच्चाले हामीलाई व्यक्तिगत सूचना प्रदान गरेको छ, हामी तुरुन्तै हाम्रो सर्भरबाट यो जानकारी मेटाउनेछौं।
हामी तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी मात्र खुलासा गर्छौं कानून वा subpoena द्वारा त्यसो गर्न आवश्यक भएमा।
यदि तपाइँसँग यस गोपनीयता नीतिको बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.
यस पृष्ठ साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पृष्ठ अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो अगस्ट 22nd, 2020 .
डचटाउन STL.org गोपनीयता नीति